Bit By Bit - Lamesa fiaraha-miasa - 5.3.2 Foldit
Foldit dia tsara tarehy antso misokatra satria mahatonga tsy manam-pahaizana mba handray anjara amin'ny fomba izay no mahafinaritra.
Ny Netflix Loka, raha evocative sy mazava, tsy mampiseho ny tena isan-karazany ny antso misokatra tetikasa. Ohatra, ao amin'ny Netflix loka ny ankamaroan'ny mpandray anjara amin'ny lehibe nanana taona ny fampiofanana ao amin'ny antontan'isa sy ny milina fianarana. Nefa, misokatra tetikasa antso koa tafiditra mpandray anjara izay tsy manana ofisialy fanofanana, araka ny hevitr'ilay fanoharana momba Foldit, ny proteinina mbola hanohon lalao.
Proteinina mbola hanohon no dingana amin'ny alalan'ny izay rojo asidra amine mandray eo amin'ny endrika. Amin'ny fahatakarana tsara kokoa ny dingana ity, manam-pahaizana afaka mamaritra proteinina amin'ny endriny manokana izay azo ampiasaina ho fanafody. Manatsotra somary, proteinina mazàna ny hifindra ny ambany indrindra angovo fanahafana, ny fanahafana izay mampifandanja ny isan-karazany ao anatin'ny manosika sy misarika ny proteinina (Sary 5.7). Noho izany, raha misy mpikaroka te mialoha izay endrika ho izay ny proteinina, dia aforeto, ny vahaolana toa tsotra: Miezaka fotsiny configurations rehetra azo atao, hanisa ny heriny, ary milaza fa ny proteinina dia aforeto an-ambany indrindra fanahafana angovo. Indrisy anefa, masiaka izany hery izany dia tafiditra amin'izany miezaka fomba azo atao rehetra dia computationally configurations azo satria misy an'arivony tapitrisa sy ny an'arivony tapitrisa mety configurations. Na dia eo aza ny ordinatera matanjaka indrindra misy ankehitriny, ary amin'ny hoavy-masiaka tsy hery fotsiny handehanana hiasa. Ary noho izany, manam-pahaizana maro no lasa nahira-tsaina algorithms mba mahomby hitady ny ambany indrindra fanahafana angovo. Nefa, na dia teo aza goavana be ny siansa sy ny kajy amin'ny solosaina, ezaka, algorithms ireo dia mbola tsy lavorary.
Sary 5.7: Ary mbola hanohon proteinina. Sary noforonina, ary napetraka ho sehatra ho an'ny daholobe amin'ny alalan'ny "DrKjaergaard". Source: Wikimedia Commons .
David Baker sy ny fikarohana vondrona tao amin'ny University of Washington dia ampahany amin'ny fiaraha-monina ny mpahay siansa miasa mba hampitombo tsara kokoa ny proteinina fomba kajy amin'ny solosaina, Ary mbola hanohon. Mba ahafahany manara-maso ny zava-nitranga raha mbola ny algorithms dia cranking lasa, Baker sy ny vondrona dia indraindray hijery ny varavarana lamba-mpamonjy izay visualized ny fandrosoan'ny ny algorithms. Raha mijery ireo Visualizations, Baker nanomboka nanontany tena na ho azo atao ho an'ny olona mba hanampy ao amin'ny dingana, ary dia toy izany no nanomboka Foldit, ny famoronana sy tsara tarehy antso misokatra (Hand 2010) .
Foldit mampody ny dingan'ny proteinina mbola hanohon ho lalao izay azo nilalao ny olona. Avy amin'ny fomba fijery araka ny mpilalao, Foldit toa ho piozila (Sary 5.8). Players dia aseho amin'ny telo-dimensions tangle ny proteinina rafitra ary afaka manatanteraka operations- "tweak", "ahetsiketseho", "indray", izany hoe manova ny endriny. Amin'ny alalan'ny fanaovana hetsika ireo mpilalao hanova ny endriky ny proteinina, izay kosa mitombo na mihena ny isa. Manakiana, ny isa dia kajy miorina amin'ny angovo-haavon'ny fanahafana ny amin'izao fotoana izao; ambany-angovo configurations vokatry ao ambony maro. Amin'ny teny hafa, ny isa dia manampy hitarika ny mpilalao rehefa mitady ambany-angovo configurations. Ity lalao ity ihany no azo atao satria-tahaka mialoha sarimihetsika naoty ao amin'ny Netflix Loka-proteinina mbola hanohon ihany koa ny toe-javatra izay dia mora kokoa ny hijery vahaolana noho ny hiteraka izy ireo.
Sary 5.8: Tapaka ny varavarana lamba ho Foldit.
Ny endrika kanto Foldit manampy mpilalao amin'ny ôfisialy kely fahalalana sady mpikaroka mba hifaninana amin'ny tsara indrindra ny manam-pahaizana algorithms natao. Raha ny ankamaroan'ny mpilalao dia tsy tena mahay ny asa, misy vitsivitsy ekipa mpilalao sy ny madinika ny mpilalao izay miavaka. Raha ny marina, tao amin'ny lohany-to-doha fifaninanana ny mialoha ny firafitry ny 10 manokana proteinina, Foldit mpilalao dia afaka nikapoka fanjakana-avy-ny-kanto proteinina mbola hanohon algorithms in-dimy (Cooper et al. 2010) .
Foldit sy ny Netflix loka tsy mitovy amin'ny fomba maro, fa samy tafiditra amin'izany antso ho an'ny vahaolana misokatra izay mora hijery noho ny hiteraka. Ankehitriny isika, dia hahita ny mitovy rafitra amin'ny hafa toerana tena samy hafa: patanty lalàna. Ity farany ohatra ny antso misokatra olana dia mampiseho fa afaka ihany koa ny ampiasaina ao amin'ny toe-javatra izay tsy mazava ho azy fa tompon'andraikitra manoloana quantification.